Chọta ebe a | Nleta Hultsfred
hem » Chọta ebe a
Chọta ebe a2022-01-19T10:28:43+01:00
Obodo Hultsfred dị na Småland na ndịda ọwụwa anyanwụ Sweden. Nwere ike ịga ụwa Vimmerby na Astrid Lindgren n'ihe na-erughị ọkara elekere. Ga-abanye n'Alaeze nke iko naanị n'ime otu awa.
Ọ na-ewe gị ihe na-erughị awa atọ na ọkara iji si na Stockholm, Gothenburg ma ọ bụ Malmö gaa Hultsfred.
Linköping, Jönköping, Växjö na Kalmar bụ ndị isi obodo ka ukwuu. N’ebe ndị a ọ na-ewe ihe dị ka otu awa na ọkara n’ụgbọala. Kalmar dị n'akụkụ oke osimiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga Öland, ọ ga-ewe ihe na-erughị ọkara elekere n'ihu.
Nwere ike were ụgbọ oloko na-aga Hultsfred. Anyị nwere njikọ na Linköping na Kalmar.
Enwere ike ịchọta ọdụ ụgbọ elu kacha nso na Växjö, Kalmar, Linköping ma ọ bụ Jönköping.